« Hitodika amin’io fanomanana io ny fanomanana io ny fandaharam-potoan’ny federasiona amin’ity taona ity. Hanomboka amin’ny taona 2013 ny fifaninanana ho amin’izany ka io no anton’ny fanomanan-tena dieny izao », hoy i Siteny Radrianasoloniaiko, filohan’ny federasiona malagasin’ny Judo.
Ny fandefasana mpikatroka any Frantsa, toa an’i Zouzou sy Brenda avy ao amin’ny AS Saint Michel sy i Nazir avy ao amin’ny klioba HMS no heverin’izy ireo fa hampety izany. Voalaza fa hanainga amin’ity herinandro ity izy ireo ary efa vita ny antontan-taratasy rehetra ilaina amin’izany ». efa nisy ahany koa ireo mpikatroka nalefa any Tonizia, hiomana any amin’ny ivon-toerana iraisam-pirenen’ny judo. Isan’ireny i Elie Norbert sy Antonnio, izay samy avy ao amin’ny klioban’ny Houssen Memorial School any Toliara avokoa.
Fanirina’ny federasiona ny tsy tokony handanindaniam-poana ny volam-panjakana ho aniroe taranja tsy misy fifanintsanana ho an’ny lalao Olympika ». « Raha ts izany dia voatery hiditra amin’ny fifidianana taranja isika satria i Jamaika sy Etopia dia taranja tokanan no hahafantarana azy », hoy izy.